Sida loo balaadhiyo guska. Baro sida loo sameeyo, soon oo wax ku ool ah.
Sida loo balaadhiyo guska
Rag badan ayaa waligood su’aal ka keenay sida loo weyneeyo guska qaab dabiici ah. Waxa ku wareega wareega shabaqa ayaa aad u tiro badan marka loo eego arrintan waxaana laga helaa kiniinno ilaa bambooyin faaruq ah oo kaa caawinaya inaad yeelato guska ka weyn. Waana in ninku aanu weligiis ku faraxsanayn cabirka guska. Wuxuu had iyo jeer doonayaa inbadan ama wuxuu ubaahan yahay qaab kaduwan ama wuxuu u maleynayaa inuusan siinin raaxada lama huraanka ah haweeney. Laga soo bilaabo amni darrada iyo hubin la’aanta ogaanshaha haddii guskaagu cabiro iyo inkale, daawooyin kaladuwan ayaa udhashay si ay u awoodaan inay wax ka badalaan cabirka guskaaga.
Qormadan waxaan ku baran doonaa sida loo weyneeyo guska qaab dabiici ah oo la xaqiijiyay.
Markii ay wax kaaga sheegaan arrintan, waxa ugu caadiga ah waa in laga fikiro inuusan jirin. Xayeysiinta iyo shirkadaha waa weyn ayaa ku ciyaara rajada ragga saboolka ah ee u maleynaya in xubintooda taranka aysan farxad u keeneyn haweenka. Tani waxay ku jirtaa in shirkado badani ay ka faa'iideystaan ​​daawooyinka phantom kuwaas oo ballan qaadaya inay kaa dhigayaan gus weyn marka waxa kaliya ee weyn ay tahay faaruqinta ay kaga tagto faylalkaaga.
Si loo taageero xaqiiqda fidinta xubinta taranka hab dabiici ah, nabdoon oo gebi ahaanba la xaqiijiyay, waxaa lagama maarmaan ah in lagu muujiyo qaab iyo daraasad cilmiyeed meesha natiijooyinka lagu arki karo. Shaki ayaa lagaa saari karaa markaad aragto habka lagu kordhinayo cabbirka xubintaada dhowr sentimitir sidaasna lagu gaarayo cabirka xubinta taranka. Waxay kuxirantahay qofka iyo caadooyinkiisa, xaaladaha nololeed, iwm. Kordhinta khibradeed way ka duwan tahay. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira xiriir aamin ah oo udhaxeeya cabirka kahor iyo kadib habka balaarinta guska.
Qaabkan aan ka hadlayno wuxuu ku saleysan yahay hage jimicsi oo gebi ahaanba u heellan hadafkan horayna loo soo muujiyay. Gusku waa muruq kale oo dheeri ah in kasta oo uu u shaqeeyo si ka duwan sidii hore, haddii la shaqeeyo oo la kiciyo wuu kori karaa. Amniga ay damaanad qaadeyso ayaa ah in dhibaatooyinka aysan ka dhalan sida ku dhici kara hababka qalliinka.
Habka loo weyneeyo guska
Xaqiiqda ah in qaabkani ka dhakhso badan yahay oo waxtar badan yahay ayaa dad badan su’aal ka keenay saxnimadeeda. Si kastaba ha noqotee, waxaan ku caddeyn doonnaa caddaynta sayniska iyo natiijooyinka la helay. In kasta oo kaniiniyada ballaarinta xubinta taranka ay waxtar leeyihiin, haddana waa kiimikooyin aan ku soo bandhigeyno jirka oo leh saameyn ku meel gaar ah. Waxa aan raadineyno waa dheereyn dhab ah, waxtar leh oo waarta.
Waxaa jira koorsooyin kooban oo ku takhasusay ballaarinta xubinta taranka oo kuu dammaanad qaadi kara guusha dhabta ah, sidaa darteed waxaad ku kalsoon tahay iyaga. Buugga "Master Guska« Waxay si fiican u sharraxeysaa xaaladda ay rag badani ku hungoobaan cabbirka xubintooda waxayna soo bandhigaan layliyo taxane ah oo qorshaysan oo leh guul dhab ah. Iyaga waxaad ku kordhin kartaa cabirka dherer iyo ballac labadaba.
Soo Degso Buugga Masterka Guska
Ma rabtaa inaad xubintaada weyneeyo? Hel Buugga Master-ka Guska oo bilow inaad ka shaqeyso yeelashada xubinta taranka weyn, waxaad ogaan doontaa faraqa:
Soo qaado buuggan halkan
Tani waxay lamid tahay inaad rabto inaad kasbato murqaha. Si loo helo natiijooyin, waa inaad ahaataa mid joogto ah oo si wanaagsan wax u qabta. Jimicsiyada waa in si sax ah loo sameeyaa si guska uusan wax dhibaato ah u soo gaarin inta lagu jiro geedi socodka koritaanka.
Dr. Brian Alfred Richards wuxuu ahaa saynisyahankii ugu horeeyey ee difaacay suurtagalnimada in xubinta taranka la dheereeyo sanadkii 1976. "Qaabka Chartham". Habka waxaa abuuray Dr. Robert Chartham, oo ku takhasusay cilmiga jinsiga.
Si loo fuliyo tijaabada, koox la xushay oo rag ah ayaa iskaa wax u qabso ku sameeyay si ay balaadhintooda u ballaadhiyaan Dr. Chartham. 64 nin ayaa loo doortay si aan kala sooc lahayn. Kalabar waxay adeegsadeen habka Chartham iyo qeybta kale farsamooyinka kale duwan. Qaabkaas, waad arki kartaa midka ka waxtar badnaa ballaarinta guska.
Intii tijaabadu socotay, waxaa suurtagal noqotay in la lafaguro dhinacyada kala duwan ee aasaasiga u ah nolosha nin walba. Midkood wuxuu lahaa xoogaa khalkhal bulsheed iyo mid qoys taasoo ku keentay walaac. Ragga tijaabada lagu sameeyay midkoodna ma haysan micropenis.
Daraasadu waxay qaadatay 3 bilood wadar ahaan waxaana cabiro kaladuwan lagu sameeyay bukaanka markii waqtiga dhaafay. Cabbiraadaha waxaa lagu qaaday xaalad kacsiga ugu badan si loo xaqiijiyo in natiijooyinka ay ahaayeen kuwo dhab ah. Si tan loo sameeyo, taliyaha ayaa la saaray lafta xubinta taranka iyo cabirka ayaa la qaaday. Cabbir cajalad jilicsan ayaa loo isticmaalay dhumucda. Qiyaasaha kadib, waxaa la ogaaday in maadooyinka habka Chartham ay kordhiyeen cabirradooda illaa 4 sentimitir dherer iyo dhumuc labadaba. Tani waxay bixisaa wax ku ool ah 93,7%.
Dhinaca kale, qeybtii kale ee aan adeegsan habkan ma muujin horumarin.
Horay maku qancisay naftaada? Waa hagaag ha ka fikirina mar dambe, soo dejiso buugga guska sayidkiisa adigoo gujinaya halkan y u weynee cabirka guskaaga sidaad u jeceshahay.
Markii la caddeeyay guusha habkan, waxay noqotay wax gebi ahaanba kacaan ah. Waxaa lagu daabacay majaladda Joornaalka Ingiriiska ee Daawada Galmada ku soo gabagabeynaya in hababku runtii shaqeeyaan. Meelaha unugyada ee xubinta ragga ah way sii kordhi kartaa, taas oo suurtagal ka dhigaysa in dhiig badan lagu helo kacsi kasta. Sidan ayey u kordheysaa cabir ahaan.
Waa hab 100% wax ku ool ah oo dabiici ah oo aan waxyeello iyo waxyeelo u geysanayn mana aha kharash la mid ah qalliinka qalliinka. Waad balaarin kartaa guskaaga waxaadna hagaajin kartaa dhibaatooyinka isku kalsoonaantaada, sidaas darteed waxaad ku wanaajin kartaa noloshaada galmada iyo dhammaan xiriirada aad leedahay.
Xusuusnow taas mahadsanid Buugga Master-ka ee Gus waxaad si ammaan ah ugu ballaadhin kartaa guskaaga
Habku wuxuu leeyahay dhowr arrimood oo muhiim ah oo ay ahayd inay tixgeliyaan si ay u noqdaan kuwo wax ku ool ah:
Jimicsiyadu kuma shaqeeyaan kaliya guskaTaabadalkeed, waxay ku lug leeyihiin muruqyada kale miskaha, gluteus, iyo caloosha hoose.
Biyaha kulul ayaa loo baahan yahay in la mariyo jimicsiyada ka hor iyo kadib si looga fogaado waxyeelada xubinta taranka iyo kordhinta waxtarka jimicsiga.
Masaajiqooyinka soo nooleynta qaarkood waa in lagu sameeyaa guska.
Isticmaalka bamka faakiyuumka ayaa laga yaabaa in loo baahdo si dhiig badan uu isugu uruuro xubinta taranka iyo natiijooyinka u kordha.
Sidaad arki karto, qaabkan waxaad ku ogaan kartaa sida loo balaariyo guska qaab dabiici ah, amaan ah oo wax ku ool ah. Waxaan rajeynayaa in aad nasiib u leedihiin habka Chartham.